Maraykanka oo ka hadlay Mukhtaar Roobow | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Maraykanka oo ka hadlay Mukhtaar Roobow
Maraykanka oo ka hadlay Mukhtaar Roobow
War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa loogu mahadceliyay dowladda Soomaaliya, iyadoo lagu amaanay dadaalada ay ugu jirto Nabad ku soo dabaalidda guud ahaan Dalka Soomaaliya.
Mareykanka ayaa si gaar ah u tilmaamay in ay aad u taageersan yihiin dadaalka dowladda, ee la xariiray in Sheikh Mukhtaar Roobow uu ka boxo Xarakada Al Shabaab oo ka soo hor jeedo dowladda Soomaaliya iyo saaxibadeeda Beesha Caalamka.
Washintong waxa ay si qoto dheer u taageereysay qorshaha mira dhalay ee dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysatay, kaasi oo la xariiro in sheikh Mukhtaar uu ka soo boxo Al Shabaab, iyadoo aan ognahay in uu qeyb ka ahaa Hogaamiyaashii sar sare ee Xarakada Al Shabaab, waxaa sidaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Mareykanka.
Dhinacakale dowladda Mareykanka ayaa tilmaamatay in ay ku dhiiri galineyso dowladda Soomaaliya dadaalada ay ku doonayso in ay wada hadal la furto cid waliba oo qeyb ka qaadan karto Hormarinta iyo Nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya.
Previous articleMadaxwaynaha Maraykanka oo u hambalyeeyay Uhuru Kenyatta
Next articleMaamulka G.Banaadir oo dalbaday 25% dhaqaalaha dekadda Muqdisho